Mourinho: Manchester ma awoodin in ay dhaliso gool ''xitaa haddii saacado ay dheeli lahaayeen'' - BBC News Somali
Mourinho: Manchester ma awoodin in ay dhaliso gool ''xitaa haddii saacado ay dheeli lahaayeen''
Mourinho oo ka xun jabka ka soo gaaray Newcastle
Tababaraha Kooxda Manchester United ayaa sheegay iney la ciyaari karayeen 10 saacadood kooxda Newcastle iyadoo aan wax gool ah la dhalinin, iyadoo lagu dubtay kooxda Man U hal iyo eber garoonka St James' Park.
Ciyaaryahan Newcastle Matt Ritchie, ayaa dhaliyey gool daqiiqadii 65-aad, taasoo ka dhigeysa markii shanaad oo laga guuleysto Man U xili ciyaareedkan.
Mourinho, kooxdiisa ayaa ku weerartey Newcastle 13 laad, lix waxey ahaayeen dhanka goolka, haatan kooxda Manchester City waxay ku hoggaamineysaa horyaalka 16 dhibcood.
"Ciyaartii dhacdey dhabtii waxey aheyd mid nalaga watay dhankasta maanta innaga burhaanteena ma kacsaneyn."
Ritchie ayaa xaqiijiyey goolka kaliya ee la dhaliyey ciyaarta, markii uu helay kubad uu soo baasey Dwight Gayle, si uu ugu baaso David de Gea. Intaa kadib, Florian Lejeune ayaa celiyey darbadii xorta aheyd ee uu soo tuurey Jonjo Shelvey's.
Guul darada soo wajahday Mourinho ayaa sii korodhay, taasoo gaartey ciyaartii toddobaad, marka lagu darro ciyaartii ka dhacdey garoonka St James Park.
Anthony Martial oo iska qasaariyay fursaddooyin badan
Madaxii hore ee kooxda Chelsea ayaa sheegay in kooxda Newcastle ay ula ciyaartay si arxan daran, taasoo ka dhigeysa markii ugu horeysay ee horyaalka oo ay kooxdu ku guuleysato garoonkeeda illaa Oktobar-tii sanadkii hore.
"Waxaan helnay fursado intii lagu guda jirey ciyaarta," ayuu yiri Mourinho. "Alexis wuxuu helay fursad uu gool ku dhalin karo, iyo kuwo kale oo fara badan 20 ilaa iyo 25-kii daqiiqo ee ugu danbeysay. Lumintii Martial fursaddii uu helay waxey aheyd mid layaab leh daqiiqadii u danbeysay."
"Sida aan qiyaasayey ma aheyn in aan halkan joogi doono gool la'aan," ayuu yiri.
"Waxay innaga heleen fursad ah qalad uu ku Kacey difaaceenna, taasoo ay ku heleen darbo xor ah oo ay gool ku dhaliyeen. Waa inay si layaab leh u farxaan, marka fursad wanaagsan la siiyey.
"Waxey u halgameen si addag wayna guuleysteen iyagoo helay dhibco, si ay horey ugu socdaan. Noloshooda baal dahab ah ayey galiyeen. Waxaan u maleynayaa iney tahay wax qurxaan in kulan ciyaareed aad ku guuleysato.
Waa markii uu dhelin waayay goolkii uu ka soo qaatay goolhayaha
Laadka xorta ee keenay in Ritchie dhaliyo goolkii Newcastle, ayaa timid kaddib markii kooxda Shaydaamada Cas Cas ciyaar yahankooda Kaaba qadka dhexe Chris Smalling lagu qasbay in si kale ciyaarta uu ula falgalo.
Mourinho wuu ka cagga jiiday inuu si toosa u dhaleeceeyo Smalling, wuxuuna yiri "Difaacu waa inuu ka tanaasulaa darbooyinka xorta ah. Waxey ahayd arrin dareen leh oo shucuureed.
"Ciyaaryahanada ku kaca falalka noocaasa goobta xariiqda ganaaxa lagu muto, waxey mudan yihiin wax ka badan in kaar loo taago, marka xaaladda la yareeyo. Sida cad, waan ogahay inaynu guul dareysaney, waana arrin culus inaan aqbalno."
Phil Jones, ayaa tilmaamey in yaraanshaha xiriirka ka dhaxeeyey difaaca ay keentay iney qalqalaan oo laga adkaado, taasina waxey dhaxal siisay in Man U haatan ay ka horeyso oo kaliya 2 dhibcood Liverpool oo kaalinta saddexaad ku jirto, iyadoo ku garaacday Liverpool kooxda Southampton 0-2.
"Maynaan soo bandhigin ciyaar wanaagsan. Waxeynu ku bilownay si hoose. Wayna cadaadiyeen, jamaahiirta taageerayaashana sawaxanka codka ka imanayey waxey la safnaayeen dhanka Newcastle," sidaas waxaa yiri Jones.
"Waxaan maamuleynay qadka dhexe ee ciyaarta qeybtii hore, goolalna waan xaqiijin karnay, laakiin si wanaagsan maynaan u dadaalin. Wixii aynu sameynay maahan mid ku filan intii nalga doonayey.
"Uggu danbeyntii waxaa nalooga adkaday hal gool. Ciyaar yahanada way murugeysnaayeen markii aanu isugu nimid qolka dhar badalashada."
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, ayaa hore u sheegay inuusan meel fagaare ah ku xiran doonin mask-ga.
Jilaaga caanka ah Amitabh Bachchan “Cali Dheere” oo isbitaal la dhigay
Jilaagan 77 jirka ah iyo wiilkiisa ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Nanavati ee magaalada Mumbai.
Maxay tahay sababta boqollaalka milateriga Nigeria ay ciidammada isaga-casilayaan?
In ka badan 350 askari oo Nigerian ah ayaa waxa ay si rasmi ah isaga-casili doonaan milateriga dalkaas.
Caro ka dhalatay go'aan uu Trump xabsi uga badbaadiyay saaxiibkii